QM oo tallaabo ka qaadeysa Kuuriyada Waqooyi - BBC Somali
QM oo tallaabo ka qaadeysa Kuuriyada Waqooyi
Image caption Golaha Ammaanka ayaa isku raacay in tallaabo laga qaado Kuuriyada Waqooyi
Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa sheegay inuu si degdeg ah u bilaabi doono ka shaqeynta talaabooyin ka dhan ah Kuuriyada Waqooyi, ka dib markii Pyaongyang ay sheegtay inay tijaabisay bam hydrogen ah.
Goluhu wuxuu cambaareeyey tijaabada, isagoo sheegay in sii jirto khatar cad oo haysata nabadda iyo amaanka caalamka.
Safiirka Uruguay ee Qamada Midoobay, ahna guddoomiyaha golaha Elbio Rosselli ayaa shaaca ka qaaday go'aanka wadajirka ah ee golaha.
Magaalada Washington-na, afhayeenka aqalka cad ayaa sheegay in baaritaan hordhac ah oo ku saabsan tijaabadii Kuuriyada Waqooyi ee tijaabada Nukliyeerka aysan waafaqsanayn sheegashadii Pyongyang ay ku sheegatay in ay si guul leh u qarxiyeen bam hydrogen ah.
Afhayeenka, Josh Earnest, wuxuu sheegay in go'doonsanaanta Kuuriyada Waqooyi ay sii qoto dheeraanayso haddii ay ku sii socdaan falalkeeda daandaansiga ah oo ay ku jiraan inay rido gantaalaha ay tijaabinayaan ee ballistigga.